Ciidamo Itoobiyan ah Oo aad u Fara Badan Oo Maanta Soo Gaaray Degmada Balan Balle ee Gobolka Gal Gaduud
Nov 19, 2011: Wararka naga soo gaaraya Gobolada dhexe ee Soomaaliya ayaa sheegaya in barqanimadii Maanta Ciidamo Itoobiyaan ah aad u hubaysan watana Gaadiidka Uuraalka, Taangiyo Diyaaraduhuna ay galbinayaan in ay soo gaareen Magaalada Balan Balle ee Gobolka Gal gaduud.
Warku wuxuu intaa ku daray in ciidamadan oo aad u fara badan watana Gaadiid kala duwan in ay maanta halkaa soo gaareen. ,Ciidamadan Itoobiyaanka ayaa dhinaca Xadka kaga soo tallaabay gudaha Dalka Soomaaliya iyadoo aan la ogeyn meel ay ku jihaysan yihiin.
Wararka qaar ayaa sheegaya in laga yaabo in ciidamadaasu Fariisimo ay ka samaystaan gudaha Magaaladaasi halka wararka qaar kalena ay tibaaxayaan in ay suurta gal tahay in ay u soo gudbaan dhinaca Koofurta.
Degmada Balan balle oo ay gacanta ku hayaan Maamulka Ahlu Sunna Wal Jamaaca ayaan isagu ka hadlin soo gelitaanka Ciidamadan faraha badan ee maanta lagu arkay gudaha magalada balan balle. Si kastaba wixii warar ah ee dheeraad ah ee ciidamadaas ku saabsan waxaad kaga bogan doontaan wararkayaga danbe.
Dhinaca Kale Iyadoo in dhawaalaba Degaanka kala Beeyr ee Degamada Beledweyne ay ku sugnaayeen Askar ka tirsan Xukuumadda Itoobiya ayaa haddana maanta halkaa soo gaaray Ciidamo kale oo dheeraad ah.
Ciidamadan Itoobiyaanka ayaa waxa ay wateen Gaadiidka Dagaalka noocyadiisa kala duwan kuwaasoo socod dheer ku maray inta u dhaxaysa degaanka Ceel Gaal iyo kala Beeyrka.
Dadka degaanka ayaa si weyn uga argagaxay ciidamadan faraha badan ee gudaha u soo galay Gobolka Hiiraan iyadoona meelaha qaar ay dadku bilaabeen in ay halka isaga bara kacaan iyagoona ka baqa qaba in halkaas uu iska hor imaad ku dhex maro Ciidamada Itoobiyaanka iyo kuwa Itoobiyaanka.
Ciidamada Xarakada shabaab oo iyagu gacanta ku haya Magaalada Beled weeyne ayaa waxaa qudhooda ka muuqanaya diyaar garow xoog leh iyadoona la arkayay Dhufeysyo hor leh oo ay ka sameysanayaan gudaha magaalada Beled Weyne iyo Daafaheeda .
Xiisado Colaadeed ayaa laga soo sheegayaa inta u dhaxaysa Magaalada Beled weyne oo ah Magaalo Madaxda Gobolka Hiiraan iyo degaanada waqooyiga ka xiga iyadoo aanay wanaagsanayn xaaladda halkaa ka jirta.
Si kastaba soo gelitaankan Ciidamada Itoobiyaanka ayaa dhiilo hor leh abuurtay iyadoo dhawaana Ururka Midowga Afrika uu ansixiyay in ciidamada Itoobiyaanku ay gudaha u galaan Dalka Soomaaliya si ay qayb uga noqdaan hawl galka amisom.